Snake VS. Colors 1.7.0 Android အတွက် Aptoide APK အား ဒေါင်းလုပ် ပြုလုပ်ပါ
ဗားရှင်း 1.7.0 လွန်ခဲ့သော 1 လက
ဂိမ်းများ အကြွေစေ့ထည့် ကစားရသော ဂိမ်းခုံ Snake VS. Colors
Snake VS. Colors ၏ ဖော်ပြချက်
Snake VS. Colors အတွက် အသုံးပြုသူ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ
Snake VS. Colors အပေါ် ပြန်လည်စစ်ဆေးမှုများ
Snake VS. Colors အပေါ်တွင် ပြန်လည် စစ်ဆေးမှု မရှိပါ။ ပထမဆုံး ပြုလုပ်လိုက်ပါ!
Snake VS. Colors အား အချက်ပြပါ
snah စတိုး 41.55k 11.05M
Snake VS. Colors နှင့် အလားတူသော အက်ပ်များကို ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပါ
APK အကြောင်း Snake VS. Colors အချက်အလက်
APK ဗားရှင်း 1.7.0
ထုတျလုပျသူ Crazy Labs by TabTale
ကိုယျရေးလုံခွုံမှု မူဝါဒ https://tabtale.com/privacy-policy/
App Name: Snake VS. Colors
Release date: 2019-03-18 06:18:48
လကျမှတျ SHA1: 7F:96:22:A2:22:40:C5:AD:85:3A:C4:C1:2F:B1:C1:E2:C4:EA:B9:2C
ထုတျလုပျသူ (CN): TabTale Ltd.
အဖှဲ့အစညျး (O): TabTale Ltd.
နယျမွေ (L): Bnei Brak
Snake VS. Colors APK ကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပါ